Willian oo shaaca ka qaaday war cusub ee ku saabsan mustaqbalkiisa kooxda Chelsea – Gool FM
Zidane oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Lionel Mesi inuu ka tagayo kooxda Barcelona
Muxuu ka yiri tababare Pep Guardiola guushii ay xalay ka gaareen kooxda Liverpool??
Jurgen Klopp oo qiray awooda kooxda Man City kaddib guuldarradii ay xalay kala kulmeen
Idaacada Cadena SER oo sheegtay hadal layaab leh ee ku saabsan mustaqbalka Lionel Messi
Dajiye February 26, 2020
(Yurub) 26 Feb 2020. Xiddiga khadka dhexe reer Brazil ee Willian ayaa wuxuu cadeeyay inay suurtogal tahay inuu ka tago kooxda Chelsea dhamaadka xilli ciyaareedkan inkasta oo ay wadahadaladu wali socdaan.
Kooxda Chelsea ayaa u soo bandhigtay 31 jirkan reer Brazil heshiis uu ku kordhinayo qandaraaskiisa Blues labo sano kale, laakiin saxaafadda Ingiriiska ayaa xaqiijineysa in wakiilkiisa uu ku adkeysanayo inuu cusbooneysiinayo seddex sano oo dheeri ah.
Wargeyska “The Mirror” ee dalka England ayaa sheegaya in Chelsea ay diyaar u tahay inay wadahadaladan la gasho xiddiga reer Brazil, halka Willian kaddib guuldarradii xalay ee Bayern Munich uu ka dhawaajiyay in waqtigiisii garoonka Stamford Bridge uu dhamaaday.
Willian ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay mustaqbalkiisa kooxda kubadda cagta ee Chelsea, wuxuuna yiri:
“Chelsea waxay soo bandhigtay labo sano oo qandaraas ah, weyna diiday inay badesho go’aankeeda, waxaan ku iri waxaan doonayaa seddex sano kale, xaaladda way adag tahay arrintaan darteed, runti ma ogi in tani ay macquul tahay iyo in kale”.
“Ujeedkeyga waa inaan sii wado shaqadeyda oo aan diiradda saaro inta ka hartay xilli ciyaareedkan, si ay Chelsea u tartanto, iskuna daydo inay badiso kulamada kaga haray tartamada kala duwan”.